‘राष्ट्रपतिज्यू, हत्यारालाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ र ?’ – कामना डेली
On २०७७ फाल्गुन १०, सोमबार ०९:१४
बुटवल । ‘मेरा पतिका हत्यारालाई के आधारमा जेलबाट छोडियो ? आफ्नो पार्टी फुट्यो, कार्यकर्ता कम भए भनेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले हत्यारा प्रमाणित भइसकेका व्यक्तिहरूलाई जेलबाट निकाल्ने ? यो देशमा न्याय, कानुन केही छैन ? के अब म पनि मेरा पतिका हत्यारालाई मारेर जेल जाऊँ ? अनि म आबद्ध पार्टीको सरकार बन्यो भने आममाफी लिएर फर्किऊँ ? छातीमा हात राखेर सोच्नुस् त तपाईंहरूलाई स्वीकार्य हुन्छ ? मान्छे मारेपछि सजाय भोग्नुपर्दैन ? दुईदुईजनाको हत्या गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ राष्ट्रप्रमुखले ?’
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रजातन्त्र दिवसका दिन पाँच सयभन्दा बढी कैदीलाई आममाफी दिएकी थिइन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ४०१ कैदीको बाँकी कैद मिनाह र १७९ जनाको भुक्तान हुन बाँकी कैद छुट गरिएको थियो। रेखा भुसालले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेकी छिन् ।